I-CINEMABEIRO yethulwe ngokusemthethweni ku-A Coruña - The World March
Ikhaya » Izaziso » Amanothi e-Press » I-CINEMABEIRO yethulwe ngokusemthethweni e-A Coruña
I-CINEMABEIRO yethulwe ngokusemthethweni e-A Coruña
30 / 09 / 2020 por Antonio Gancedo
I- "I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia", eCINEMABEIRO, izobanjwa ngo-Okthoba 2, 3 no-4.
I- "I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia", eCINEMABEIRO, yethulwe ngalo Septhemba 29, 2020 eCity Hall yase-A Coruña.
Ihlelwe nguMundo sen Guerras e sen Violencia ngokubambisana nezinhlangano eziyi-16 namaqembu ezenhlalo, uxhaso lwe-EMALCSA Foundation kanye nokusebenzisana koMkhandlu Wedolobha i-A Coruña, luzoba ngo-Okthoba 2, 3 no-4 kusetshenziswa amafomethi amabili: Izinkulumo eziku-inthanethi kanye ukubonwa ubuso nobuso esakhiweni saseLa Domus e-A Coruña.
UMaría Núñez, umqondisi wezinhlelo CINEMABEIRO, iveze njengezinjongo ze-Mostra "ukuqwashisa umphakathi nokusola izingxabano ezikhulayo futhi kunikeze izwi kubantu besiko lokungabi nodlame".
U-Yoya Neira, iKhansela Lezenhlalakahle Yomkhandlu Wedolobha i-A Coruña, ugcizelele ukuthi "I-Coruña izoba uphawu lokuhlonipha nokwakhiwa kwamalungelo abantu ngamasiko".
Ngokusho kwabagqugquzeli bayo, “I-CINEMABEIRO yazalwa ngesidingo sokwenza umcimbi ozinikele ekuqhakambiseni, ukubonakalisa nokuxoxa ngamalungelo abantu, hhayi edolobheni lase-A Coruña kuphela kodwa naseGalicia.
Ithuluzi elibaluleke kakhulu ukubika nokwenza udlame lubonakale
I-cinema iyithuluzi elibaluleke kakhulu lokusola nokwenza ubudlova obenziwe kumalungelo ethu bubonakale. Kuyinto iwindi elisenza sixhumane namanye amaqiniso; isikhulumi esiziphindiselayo esisigqugquzelayo futhi esisize ekuqondeni umhlaba kusuka ekuzinikeleni kwamalungelo abantu.
Futhi bayaqhubeka nokuchaza:
“I-CINEMABEIRO iyinkundla yokusabalalisa olunye uhlobo lwe-cinema, enenhlalo ecacile yezenhlalo, ehlose ukusondeza umphakathi ezindabeni ezinjengokungavikeleki kwemisebenzi, ukufuduka kwamanye amazwe, udlame ngokobulili, ukushintsha kwesimo sezulu, ukulingana kanye nokufakwa kwabantu.
I-CINEMABEIRO, ihlose ukuba nguMkhosi okhethekile
Uhlelo lwakuqala lweCINEMABEIRO luzoba ngumbukiso webhayisikobho yamaLungelo aBantu ehamba phambili, ohlinzeka ngokukhethwa ngokucophelela kwamafilimu wezici zakamuva namafilimu amafushane, anemikhosi ehlukahlukene kakhulu emhlabeni.
Kulolu hlelo lokuqala lwe- "Mostra Internacional de Cinema pola Paz Cinemabeiro" lunohlelo lwayo lwamafilimu amane, izikhindi eziyishumi nesithupha namatafula ayisiyingi amahlanu, ngenxa yenkinga ye-COVID-19, azobanjelwa online, lapho izikhulumi zibambe iqhaza Ama-NGO kanye nezinhlangano ezisebenzisanayo ezixazulula inkinga yala maqembu alandelayo:
Ubunzima bokuhlala ekudingisweni nelungelo lokufuduka
Ubufazi nobumama: ukubuza uhlelo lokuzala lwe-heteropatriarchal
Ilungelo lokufundiswa kwabantu abakhubazekile ngokusebenza nangokwengqondo, ukuphazamiseka kwengqondo nabasengozini yokuvalelwa ngaphandle emphakathini
Ukuguquka kwesimo sezulu nokonakala kwentando yeningi njengezinsongo ezinkulu emhlabeni wethu
Ukucwaswa ngokocansi, ukubukelwa phansi kwabantu abasengozini yokuvalelwa ngaphandle emphakathini
Kuzophothulwa ngezingxoxo eziningi zomsakazo nabadidiyeli ababandakanya bonke, okwenziwa yinhlangano yabazali babantu abane-cerebral palsy (ASPACE) Coruña ohlelweni lwayo i-'La radio de los Gatos '. "
I-CINEMABEIRO, kaMundo sen Guerres e sen Violencia, iyingxenye yomkhankaso kulo nyaka + Ukuthula + Ukungabi Nodlame - Izikhali Zenuzi egujwa ezingeni lamaplanethi ngobuningi bemisebenzi phakathi kukaSepthemba 21, 2020 kuze kube ngu-Okthoba 2, 2020.
Incwadi evulekile yokusekela i-TPAN
Umhlaba wesi-3 kuMashi umenyezelwe